Thiago Silva Oo Sharfay Frank Lampard Kadib Guushii Chelsea Ee Champions League
HomeWararka CiyaarahaThiago Silva oo sharfay Frank Lampard kadib guushii Chelsea ee Champions League
Daafaca Chelsea Thiago Silva ayaa maamuus u sameeyay tababarihiisii ​​hore Frank Lampard ka dib markii Blues ay garaacday Manchester City markii ay ku guuleysteen koobkoodii labaad ee Champions League .
Kooxda Galbeedka London ka dhisan ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah si ay u garaacaan kooxda heysata Premier League iyadoo gool uu dhaliyay Kai Havertz qeybtii hore ee ciyaarta ay ku badisay kooxda.
In kasta oo Thomas Tuchel uu ku helay dhammaan abaalgudyada qorshihiisa xeeladeed ee fiican, haddana Chelsea ma aysan u soo bixi lahayn finalka Champions League haddii uusan Lampard markii ugu horreysay ka kaxayn lahayn heerka guruubyada.
Lampard ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray qancinta wakiilkii xorta ahaa ee Thiago Silva inuu u soo dhaqaaqo Stamford Bridge xagaagii la soo dhaafay, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa amaanay tababarihiisii ​​hore ka dib guushii Sabtida.
Lampard la’aantiis, ma joogi lahaa halkaan, ayuu kabtankii hore ee PSG u sheegay RMC Sport. Aad ayaan u faraxsanahay, waxaana rajeynayaa inuu isna noqon doono.